Gingde blọgụ ezughị, "pịa anụ ahụ"! | Martech Zone
Nke a bụ ahịrịokwu m na-agwụ ike - ngwa ngwa - n'oge ọchịchị onye isi ala a. Amaghi m onye dere okwu mbu mana ahuru m ya ka eji ya n'oge a. N'oge na-adịbeghị anya, gọvanọ nke West Virginia jiri okwu ahụ mee ihe iji tụlee ihe mere Barack Obama ji tufuo West Virginia na ntuli aka nke Hillary Clinton. Ọ na-anwa ịgbachitere ndị mmegide na West Virginia ka na-enwe nsogbu agbụrụ na Obama tụfuru ya naanị n'ihi na ọ naghị etinye oge zuru ezu ịpị anụ, aka n'ikwe aka.
Ọ kwesịrị ịmasị ndị na-ere ahịa iji chọpụta oke mmetụta nke ahụ ịpị anụ n'ezie nwere na ntuli aka. Mgbasa ozi dị iche iche dị ka usoro mgbasa ozi nchekwa data na methamphetamines. Akụkụ niile na-eweta amamịghe mgbakọ na mwepụ, na-etinye usoro ahịa oge na ebumnuche site na ọtụtụ ndị na-ajụ ase, ma na-agbasi mbọ ike pịa anụ ahụ. Ndị na-ere ahịa kwesịrị iburu n'uche, na mpụga nke unyi nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na usoro ndị a na-arụ ọrụ.
Ihe anyị kwesịrị ịdabere na mkpọsa Obama
Ọtụtụ n'ime anyị chefuru na e mesoro Hillary dị ka onye ndoro ndoro ochichi ala 2008 otu afọ gara aga na Barack Obama nọ na ndepụta dị mkpirikpi nke ndị na-enweghị uche 'na ndị na-abịanụ' na Democratic Party. Mgbalị ya ziri ezi akwụla ụgwọ, ọ bụ ezie. Otu anya na Obama na saịtị na ị ga-ahụ a ozi ọ bụla lekwasịrị:
N'ebe a na Indianapolis, enwetara m ozi ịntanetị ebe m nwere ike inye onyinye, na nnọchite mmadụ, na mkpọsa ahụ. The Obama mkpọsa meghere (ma mechibidoro) otu ụlọ ọrụ na-egbochi ndịda nke gburugburu ebe a na Indy - ezigbo ala na ụlọ pịa anụ ahụ. Enwetara m ụfọdụ akwụkwọ ozi sitere na mkpọsa Obama. A anya na ihe ndị ị ga-ahụ na Obama bụ a aka-n'ikwe igwe, na n'elu Ihe omume 16,000 rute ugbu a na ton ọzọ ga-aga.
Ekwetaghị m na Obama tụfuru West Virginia n'ihi na ọ hapụghị aka zuru oke. M na-ekwenye na ọ tufuru naanị n'ihi na ozi adighi nma na Appalachia.
Anaghị m akwalite Barack Obama maka Onye isi ala, naanị m na-achọpụta igwe ahịa ahịa dị egwu nke etinyebere. Ihe ọ bụla ndị otu ya na-eme ziri ezi - ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ha anaghị atụfu ohere ọ bụla ịpị anụ.
Ingpị anụ na-arụ ọrụ m
Enweela m ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta, karịsịa ebe a na Indianapolis. Na-akpali mmasị ezu, e nwere ọtụtụ Ndị na-ede blọgụ Indianapolis nke onyinyo ya nke m na-adaba na ntanetị Intanet. Na mpaghara mpaghara, agbanyeghị, ekwenyere m na enwetara m aha (na ihu) nke ndị mmadụ na-echeta.
Enwere m ihe ịga nke ọma na mpaghara m ịpị anụ. Ọrụ m na Obere Indiana, Indy Cultural nzọ ụkwụ, Kọmitii Superbowl nke 2012 ma jiri ohere ọ bụla kụziere ndị ọchụnta ego obodo banyere Social Media enweela mmetụta dị ukwuu karịa na blọọgụ m. Nke ahụ bụ ọgwụ siri ike ilo ilo nyere oge niile m tinyere na blọgụ m mana ọ dị mkpa ka ndị folks ghọta na ịde blọgụ ezughị oke!
Pụọ na pịa anụ ahụ! De blọgụ na-enye nghọta na eziokwu nke saịtị broshuọ ahịa enweghị ike ịnye - mana ọ ka anaghị enye ahụmịhe nke ile mmadụ anya na ịkwanye aka ha.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na m ga-enwe nnukwu blọọgụ buru ibu nke nwere nnukwu mbupụta mba ma ọ bụrụ na m nwere ike ịme ya na mmemme mba. Nke ahụ na-esiri ike mgbe niile na ọrụ oge niile, mana m ka na-atụ anya ime ya ole na ole n'afọ a.
Tags: 2008ntuli akan'ime mmadunzukọObamandọrọ ndọrọ ọchịchịpịa anụ ahụNkwado ire ahịa
Mee 28, 2008 na 8: 06 AM
Nnukwu, echiche ziri ezi, Doug. Blọọgụ gị chetara otu akụkọ m gụrụ n'izu gara aga na-akọwa otu n'ime ndị isi mgbasa ozi Senator Clinton na-akwado n'oge maka iwepụta $100 nke ọ bụla n'ime ụmụ nwanyị 1,000,000 America.
Lee ihe na-adọrọ adọrọ nke blockbuster! Mana onye ndụmọdụ mgbasa ozi ọzọ kagburu atụmatụ ahụ. (Anyị makwaara onye ndoro-ndoro ochichi na-eji micro-fundraising: Obama.)
Na "ịpị anụ ahụ" vs usoro ịntanetị: echere m na onye ọ bụla na-enye oke dị iche iche. Ụfọdụ ndị ahịa (ma ọ bụ ndị ntuli aka) ga-emetụ naanị site na mgbasa ozi nkeonwe. Ndị ọzọ ị gaghị ejikọ ma ọ bụrụ na ị nwere ịntanetị. Na-abawanye nsonaazụ na-ewe ha abụọ.
(Ma ọ bụ, dị ka enyi ochie na-ekwu mgbe e nyere ya nhọrọ nke vanilla ma ọ bụ chocolate ice cream: "Ee!")
Mee 28, 2008 na 5: 29 PM
Doug: Ekwenyere m kpamkpam. Ejirila m ọtụtụ otuto ebe a n'Atlanta Atlanta Web entrepreneurs na nzukọ ndị ọzọ metụtara na mmemme m na-aga ma na-akwado karịa ka m nwere ike nweta m blog. Na mgbakwunye, ọ na-enye nnukwu ụgwọ ọrụ ịnọnyere ndị mmadụ ihu na ihu karịa naanị gị n'azụ kiiboodu na ihuenyo kọmputa.
Jọn acha anụnụ anụnụ
Mee 29, 2008 na 9: 30 PM
Ee, anyị na Truffle Media na-aga n'ihu na-enwe ọnụnọ na ihe omume (World Pork Expo bụ izu na-abịa maka ndị nwere mmasị:) gbakwunyere anyị na-eji ekwentị ochie na email mgbe niile iji metụ ntọala.
Anyị na-ejikwa ọwa mgbasa ozi ọhụrụ ka anyị na ndị nwere mmasị n'ọrụ ugbo na-akpakọrịta: Twitter (http://twitter.com/trufflemedia), SwineCast.com (na saịtị nwanne ya maka anụ ehi, mmiri ara ehi, anụ ọkụkọ, na ihe ubi) blọọgụ/ pọdkastị, Flickr (http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/), na Blip.TV (http://trufflemedia.blip.tv/).
Mana ọ nweghị ihe dị ka ịnọ n'ebe ahụ ka ịnụ ihe ndị mmadụ nwere mmasị na ya, were biya n'aka kparịta ụka, wee hụ nuance / asusu anụ ahụ na isiokwu ụfọdụ dị nro (ọka maka nri ma ọ bụ ọka maka mmanụ ọkụ bụ mkparịta ụka na-ewu ewu na Iowa:)
Daalụ ọzọ Doug.
Ka m gachara njem 10,000 kilomita n'ofe obodo na njem nlegharị anya blọọgụ anyị, enwere m nkwenye siri ike na ike nke ịkparịta ụka n'igwe F2F nkeonwe. Ọchị adịghị ọnụ ahịa ma e jiri ya tụnyere lol.
Doug – Ezi nbipute, nwoke m. Achọtara m ịma mma aka dị mma na ịmụmụ ọnụ ọchị ka ọ na-enwe mmetụta karịa n'ịre ahịa, ịkparịta ụka n'Ịntanet na mmekọrịta mmekọrịta karịa ihe ọ bụla ọzọ m nwere ike ime.
N'oge na-adịbeghị anya, ahụrụ m onwe m na mgbanwe ọrụ, naanị nke abụọ m na-abanye na mmepe azụmahịa na oge niile. N'ajụjụ ọnụ onye ọ bụla jụrụ m, "Gịnị ka ị na-eme iji wuo ụzọ/azụmahịa?" Obi abụọ adịghị ya, netwọkụ nkeonwe m bụ ebe kachasi enweta ụzọ ka m na-enweta ntinye aka n'aka ha. Enwere ike ime nke a naanị site n'iweta uru na nkwukọrịta mmekọrịta. M na-eji nkebi ahịrịokwu ahụ "kwee aka gị" ọtụtụ mgbe mgbe m na-ezigara mmadụ email. Dị ka ọ dị, "A na m atụ anya ịma aka gị otu ụbọchị." Abụghị m onye na-akwado……”ịpị anụ ahụ”. Ụda ụdị….anụ ahụ.